Daroka baomba tamin’ny fiangonana sy hotely maro niteraka horohoro tao Sri Lanka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Avrily 2019 13:52 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, Shqip, Ελληνικά, Español, Português, Filipino, English
Voadaroky ny andiam-pipoahana miisa valo tamin'ny marainan'ny alahadin'ny Paska (21 avrily 2019) tany amin'ireo faritra betsaka fiangonana sy hotely manerana ny firenena i Sri Lanka, ka farafahavitsiny olona 207 no maty ary mihoatra ny 450 no naratra.
Lasibatr'ireo fipoahana miisa enina voaomana sy niara-nirefotra ny fiangonana feno mpivavaka manatrika ny fotoanan'ny alahady marainan'ny Paska. Tafiditra ao anatin'izany ny fiangonana St. Anthony ao Kochchikade ao Colombo, ny fiangonana St. Sebastian ao Negombo, ary ny fiangonana Ziona amin'ny tanàna betsaka Tamil ao Batticaloa. Farafahakeliny olona 67 no maty tao amin'ny fiangonana St Sebastian fotsiny.
Mbola tsy nisy ireo nilaza ho tompon'antoka tamin'ity fanafihana ity. Na izany aza, mihevitra ireo tatitra fa ireo mpanao vivery ny ainy no nanao izao zavatra izao.
Nambaran‘ny governemanta Srilankey ny tsy fahazoana mivezivezy manerana ny nosy manomboka amin'ny enina ora hariva ka mandra-maraina. Ankoatra izay, nobahanana vonjimaika ny habaka media sosialy tahaka ny Facebook sy ny Instagram isorohana an'izay mety ho fampielezana vaovao sandoka.
Firenena marofoko sy ahitana fivavahana isankarazany i Sri Lanka. Sinhalese (74,8%) no mandrafitra ny vondrom-poko lehibe indrindra ao amin'ny firenena, arahan'ny Tamil Sri Lankey (11,2%) ary ny Moor Sri Lankey (9,2%). Eo amin'ny sehatry ny fivavahana indray, Boddhista (saika avy amin'ny vondrom-poko Sinhalese) ahitana ny 70 isanjaton'ny mponina 22 tapitrisa arahin'ny Haindò (13%), Miozolomana (10%) ary Kristiana (7%).
Efa niaretan'ny firenena ny ady an-trano naharitra telopolo taona nifanaovan'ny tafiky ny governemanta tamin'ny milisy mitam-piadian'ny mpisintaka Tamil Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) nifarana tamin'ny taona 2009. Lasa nampahatsiaro ny olompirenena ny fanafihana tamin'izany fotoana izany izao fandarohana baomba izao.
Nianiana ny minisitry ny fiarovana Ruwan Wijewardane handray ny fepetra rehetra sy izay tokony atao hiadiana amin'izay vondrona mahery fihetsika rehetra manao ny ataony ao amin'ny Firenena. Heno ihany koa ny valintenin'ny governemantan'i Zealand vaovao taorian'ny fitifirana tao Christchurch tamin'ny volana marsa farany teo:
Mandrisika ny media ny minisiteram-panjakana misahana ny fiarovana @RWijewardene tsy hamoaka ny anaran'ireo nanafika androany. Mampitandrina izy fa mety hanararaotra ny toe-draharaha ny vondrona hafa mahery fihetsika ka hampisy fihenjanana eo amin'ny vondrom-pîarahamonina. “Aza manome feo ny ekstiremista. Aza manao izay hahatonga azy ireo ho maritiora”
Mandrisika ny Srilankey rehetra ny praiminisitra Ranil Wickremesinghe ho tony sy hivondrona.
Nanameloka ny herisetra ny sehatra iraisampirenena ka anisan'ny iraisampirenena ny Papa Fransoà.
11 ora izayNepal